Usuku Oluhle Lwama-Veterans | Martech Zone
NgeSonto, Novemba 11, 2007 NgeSonto, ngoMashi 24, 2013 Douglas Karr
Ngo-1954, uMongameli u-Eisenhower wasayina isimemezelo sokuqamba kabusha i-Armistice Day ngokuthi yi-Veterans Day. Usuku lwe-Armistice lwalukhumbula usuku okwaphela ngalo iMpi Yezwe 1. UMongameli Ford wasayina lolu suku lwaba yiholide likaHulumeni ngo-1975 kanti uSuku lwamaVeterans lokuqala olugujwa kwaba ngo-1978. Ngonyaka ka-2001, isonto loSuku LwamaVeterans manje selaziwa njengeViki Lokuqwashisa NgamaVeterans ezikoleni ukuletha ulwazi ngeminikelo kanye nokuzidela kwamaVeterans.
Usuku lwamaVeterans luhlukile kuSuku lweSikhumbuzo futhi kuvame ukudideka ngalo. Usuku lweSikhumbuzo luhlonipha abesilisa nabesifazane abanikela ngezimpilo zabo ngenxa yezwe. Usuku lwamaVeterans lukuhlonishwa kwensiza.
Ngibe nelungelo lokuhlala etafuleni e I-Techpoint neMeya entsha yase-Indianapolis, UGreg Ballard, ngolwesihlanu. IMeya uBallard nami saxoxa ngomsebenzi wethu ePersian Gulf eDesert Shield naseDesert Storm. IMeya uBallard wayenguMajor eMarine Corps. Ngangingu-Mate kagesi kuTank Landing Ship, iSpartanburg County (LST-1192) eyayithutha olwandle. Ngaba ngabangane abahle nabambalwa beCorps, ikakhulukazi abambalwa I-EOD abafana ngisebenze ngokubambisana nezinyanga.
Ukuhlonipha Omakadebona Akuhloniphi Impi
Ukuhlonipha omakadebona akufani nokuhlonipha impi. Akekho ofisa ukuthula ngaphezu koMakadebona. Sicela ungalihloniphi ibutho lethu ngokungaboni imihlatshelo abaqhubeka bayenzela umndeni wabo nezwe labo. Baphathwa kabi ngokwanele nguhulumeni wabo - abadingi ukuwuzwa bona kanye abantu abazinikele ukuvikela - mina nawe.
Tags: umdalausuku lwama-veterans
Nov 11, 2007 ngo-10: 48 AM
Ngiyabonga ngenkonzo yakho, Doug.
Nov 11, 2007 ngo-4: 52 PM
Okuthunyelwe okuhle kakhulu, Doug! Siyabonga ngesikhumbuzi futhi ngiyabonga ngomsebenzi wakho ezweni lethu!
Sanibonani nonke, ngokuzayo lapho seniphume emphakathini futhi nibona umuntu egqoke isigqoko noma ijakhethi yamasosha aseMelika, asukume, amxhawule (athi) “ngiyabonga ngomsebenzi wakho.” Kuyindlela encane yokubonga engenza umakadebona azi ukuthi uyayazisa inkululeko insizakalo yabo esize ukuyigcina. Akudingeki uvumelane nempi ukuze ubonge labo abazinikela enkonzweni.
Nov 11, 2007 ngo-6: 13 PM
Ngiyabonga Bo! Ngiyabonga Julie!
Enye indlela abantu abangasiza ngayo ukusiza abalimele ababuya ekhaya futhi abanalo usizo abaludingayo.
Iphrojekthi Elimelekile Yamaqhawe
Nov 11, 2007 ngo-7: 31 PM
Siyabonga ngokusikhumbuza ukuhlonipha omakadebona bethu, futhi siyabonga ngomsebenzi.